Izingcingo zakho ezindala zivuselelwa kanjani zibe yizingodo zegolide - i-Afrikhepri Fondation
Amafoni akho amadala asebenza kanjani kabusha abe yimigoqo yegolide
CLo mbuzo uvela ngokwanda: ukuthi wenzeni ngemishini yethu yakudala kagesi? Inkampani yaseBelgium isisitholile isisombululo: ithola izinsimbi eziyigugu (ikakhulukazi igolide) eziqukethwe kule doti. Le mboni itholakala eHoboken eBelgium futhi iguqula izingcingo zakho ezisetshenzisiwe zaba imigoqo yegolide. Lesi sikhungo sokwelashwa, esihlukile eYurophu, sisebenzisa kabusha amaselula namakhompyutha amadala ngokuthola izinsimbi eziyigugu ezikuwo.
Ngempela, amakhadi e-elektroniki ale nsila abalulekile. Ekhadini ngalinye likagesi kunezixhumi zensimbi ezingenziwa ngegolide, yilokhu okutholakala kule femu ngenxa yenqubo eyinkimbinkimbi. Ezinye izinsimbi nazo zingaba khona, njengesiliva, i-platinum noma i-palladium (insimbi engajwayelekile evela emndenini we-platinum). Zonke lezi zinsimbi azivamile ngakho ziyabiza.
Ngokusobala, inani lensimbi eyigugu equkethwe ocingweni lincane futhi kudinga izinkulungwane zamadivayisi ukuthola inani elikhulu legolide. Isibonelo, umakhalekhukhwini ojwayelekile uqukethe cishe amasenti angama-50 ezinsimbi eziyigugu futhi i-smartphone iqukethe cishe i-euro eyodwa. Ukuthola i-1 kg yegolide (cishe u- € 1) kudinga izingcingo ezingama-40.
Ukubuyisa lezi zinsimbi, imfucumfucu iyagaywa, kususwe izinsimbi ezingekho ayoni kanye nemikhiqizo enobuthi, bese izinsimbi ezitholakele zincibilikiswa esithandweni somlilo. Yonke inqubo igcinwa iyimfihlo yinkampani. Ekugcineni, sithola izinsimbi eziyigugu ezimsulwa ezigxile ku-99,9%.
Kulezigidigidi ze-10 zamaselula ezikhona emhlabeni jikelele imali encane kuphela isetshenziselwa kabusha, ukuvuselelwa kwamadivayisi kagesi cishe kuzokhula kakhulu eminyakeni ezayo.
Udumo kuJerry Rawlings
Umlando we-Fulani: umsuka, amasiko, izinkolelo namasiko